Tsy mahagaga ry zareo raha mandroso | NewsMada
Nanamarika ny taom-baovaony ry zareo Sinoa. Tsy tao Sina ihany fa naneran-tany mihitsy, raha mbola toerana nahitana Sinoa, nahitana totorebika avokoa. 9 amin’ny Sinoa 10 latsaky ny 25 taona, mahay momba ny tontolon’ny kung-fu avokoa. Izay toerana malalaka rehetra ao amin’ny tanàna iray any Sina, saika natokana hanaovana qi Gong avokoa. Tafiditra anisan’ny taranja ampianarina any an-tsekoly ny hira sy ny zavamaneno koto.
Ampahany hoenti-maneho ny fananan’ny Sinoa fototra tsara ireo. Saina, vatana, fanahy, samy voakolokolony amin’ny « lova voajanahary » sahaza azy. Tsy nisy, na iray aza, nindramina tany ivelany. Zava-dehibe iny fa ny tena goavana nahatazona ny maha izy azy ny Sinoa na teo aza ny fidiran’ny zava-bahiny, toy ny kolontsain’ny firenena tandrefana any aminy. Tsy mahagaga raha mandroso be sy manana tanjaka atahoran’izao tontolo izao i Sina.
… Ny an’ny Malagasy kosa, nariana sy alavirina toa fasam-bao ny fomba amam-panao ary kolontsaina malagasy. Novetavetaina ny hasina ananan’ny faritra sy toerana samihafa. Ny Malagasy ihany no manambany sy manivaiva ny fahaizan’ny Malagasy toa azy mifehy ny andro. Montsana ny « aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra an-tampon’ny loha », sns. Ambonin’ireo, natao rapadango ny an’ny vahiny. Vokany, tsy manana ny maha izy azy ny Malagasy fa entim-bahiny amin’izay tiana hitondrany azy.
Ho an’ny mpandinika ny fiarahamonina sy ny fivoarany, raha mitohy izao fankahalan’ny Malagasy ny maha izy azy izao, « taona folo vitsivitsy sisa andrasana dia hividy tany amin’ny vahiny ny Malagasy. Izany hoe, ny vahiny indray no ho tompon-tany fa isika indray no vahiny ». Hoy i I.P Andriamangatiana : « raha izao no mitohy, hatokan’ny vahiny ao anaty toerana iray ny Malagasy mba hojerijeren’ny mpizahatany, tahaka ireny vakoka fitahiry ireny! ».
Sao mba fandrebirebena fotsiny ity adilahy politika tsy manam-piafarana ity fa tsy tena « zavatra ». Tsy avelan’ny sasany hahalala ny tena momba azy ny Malagasy. Ny Malagasy rahateo, toa tsy mety mahatsapa izany. Fotoana itadiavana ny fototra izao raha tiana ny « …Ho sambatra tokoa izahay ».